Mikel Arteta oo shaaca ka qaaday qaabka uu uga dhaadhiciyay Granit Xhaka inuu sii joogo Arsenal – Gool FM
(London) 10 Jan 2020. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa wuxuu shaaca ka qaaday qaabka uu ugu dhaadhiciyay Granit Xhaka inuu kusii nagaado Emirates Stadium.
Wakiilka Granit Xhaka ayaa wuxuu horey shaaca ugu qaaday inuu heshiis la gaaray kooxda Hertha Berlin ee dalka Jarmarlka, si uu laacibka reer Switzerland uu markale dib ugu laabto horyaalka Bundesliga.
Hadalkan uu sheegay wakiilka Granit Xhaka ayaa wuxuu ahaa kahor inta uusan Mikel Arteta qabanin shaqada tababarka ee kooxda Arsenal isbuucyo kahor, laakiin rabitaankii ciyaaryahanka ayaa isbedelay kaddib imaatinka macalinka reer Spain.
Haddaba shabakada caanka ah ee “Sky Sport” ayaa waxay shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Mikel Arteta kahor kulanka ay barri la ciyaari doonaan Crystal Palace waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan doonayay inaan ogaado dareenka Granit Xhaka, waxaan isku dayay inaan gaarsiiyo fariin aan ku garab istaagayo isaga, waxaan sidaas u sameeyay sababtoo ah waxaan fahamsanahay ahmiyada uu u leeyahay kooxda Arsenal”.
“Waxaan isku dayay in Granit Xhaka aan ku qanciyo inuu sii joogo, jawaabtiisuna waxay ahayd mid wanaagsan, Xhaka wuu nala sii ciyaari doonaa, wuxuuna ka laabtay hamigiisa ahaa inuu ka tago kooxda”.
Si kastaba ha noqotee, Granit Xhaka ayaa u dhaqaaqay kooxda Gunners sanadkii 2016, wuxuuna kaga soo biiray naadiga reer Germany ee Borussia Mönchengladbach, isagoo Gunners u ciyaaray ilaa iyo haatan152 kulan, wuxuuna dhaliyay 11 gool, halka sidoo kale uu ka caawiyay saaxiibadiis 17 gool kale.